WARBIXIN: Waa Kuwan AFARTA Sababood Ee Barcelona Ka Caawin Kara Inay Ku Guuleysato UEFA Champions League Markeedii Lixaad - Gool24.Net
WARBIXIN: Waa Kuwan AFARTA Sababood Ee Barcelona Ka Caawin Kara Inay Ku Guuleysato UEFA Champions League Markeedii Lixaad
August 11, 2020 Apdihakem Omer Adam
Kooxda ree Spain ee Barcelona ayaa gaadhay wareega siddeed dhammaadka ee Champions League kaddib guul ay ka gaadheen Napoli waxaana ay magaalada Lisbon tagayaan iyagoo ku riyoonaya hanashada koobkaas markoodii lixaad taariikhda.
Dabcan Bayern Munich ayaan noqon doonin koox sahlan wareega siddeeda si lamid ah Man City iyo Lyon wareega afar dhammaadka balse Barca ayaa filan doonta inay dhammaan xanuunkii xilli ciyaareedkan soo maray gadaal iska dhigto.
Walow ay jiraan dhibaatooyin badan oo Barca soo haystay xilli ciyaareedkan, haddana waxaanu halkan idiinku muujin doonaa afar sababood oo dhoola-caddayan ku abuuri kara jamaahiirta kooxdaas oo ay CL ugu guuleysan karaan.
Wax yar oo Lionel Messi ah ayaa ku filan Barcelona, xiddiga ree Argentina ayaa awood u leh inuu kooxdiisa ku hoggaamiyo hanashada koobkan, qiyaastii 30 daqiiqo ayuu si dhab ah uga hortagay Napoli iyadoo daqiiqadahaasba kulanka lagu kala calaf-qaaday.
2: Soo Laabashada Frankie De Jong
Xiddiga ree Holland ayaa qaabkiisii ugu wanaagsanaa u ciyaaray kulankii Napoli, waxa uu qaybta garoonka ee Napoli ku saxay 93% kamida baasaskii uu dhiibay taas oo wax badan u sahashay kooxdiisa, Barca ayaan u xiisi doonin Arthur haddii uu Frankie qaabkan sii wado.
3: Habka Koobka Loo Ciyaarayo
In hal kulan la ciyaarayo wareeg kasta ayay faa’idada ugu badani ugu jirtaa Barca oo sanadihii ugu dambeeyay kulanka lugta labaad argagax lasoo kulmaysay….”Ma jirto koox ugu cad cad marka habkan loo ciyaarayo” ayuu dhawaan yidhi khadka dhexe ee kooxdaas ee Sergi Roberto.
4: Saddexleyda Dambe Ee Kooxdaas
Goolhaye Marc Andre Ter Stegen, Gerard Pique iyo Clement Lenglet ayaa aad muhiim ugu ah waxkasta oo uu Setien doonayo, Ter Stegen ayay sugaysaa shaqada ah inuu Manuel Neuer is baro Jimcaha, Pique ayaa xilli ciyaareedkan qaab ciyaareed joogto ah soo samaynayay halka Lenglet uu horumarkiisa sii watay.